"Casa Fiore" CITRA ikhowudi 011028-LT-0003 - I-Airbnb
"Casa Fiore" CITRA ikhowudi 011028-LT-0003
Cornice, Liguria, Italy
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFiorella
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFiorella iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwidolophu encinane lwesakhiwo ise kwindawo qhinga ngokundwendwela i Cinque Terre, i-Gulf of Iimbongi, lonke Riviera di Levante, kokonyuka ezingaphakathi kwilali ukufikelela iimpawu "Casa Fiore", eliquka okulala amathathu. Ebhedini, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nekhitshi elinezitena eziveziweyo, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye ne-panoramic terrace. Iivenkile ezinkulu, iivenkile, iindawo zokutyela kunye nendawo yokuthenga yeOutlet Shopinn zikwilali ekufutshane yaseBrugnato.
IKHOWUDI ye-CITRA 011028-LT-0003
"I-Casa Fiore" yeyona ndawo ifanelekileyo yokuya kubathandi bokuzola, kwiihambo kwindawo eluhlaza yeVal di Vara kunye nemizuzu engamashumi amabini ngemoto ukusuka elunxwemeni lwaseLevanto, eDeiva Marina naseBonassola.
ICornice yidolophu encinci eVal di Vara engqongwe buhlaza kunye nendalo engonakaliswanga, ibekwe kwindawo enobuchule kwabo bafuna ukonwabela ubuhle beCinque Terre kodwa kwangaxeshanye bazintywilisele ekuzoleni. Kwakhona kunokwenzeka ukutshintshana iintsuku elwandle okanye emlanjeni ngokuhamba emahlathini.
Siza kukwazi ukucebisa iindawo ezineempawu ongaziphoswa!
Umbuki zindwendwe ngu- Fiorella
Inombolo yomthetho: 011028 LT0003
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cornice